नेपाल आज | धर्म सन्तानका नाममा बालबालिका तस्करी, कसरी पुर्‍याइए ६ देशमा १३७ बालबालिका ?
धर्म सन्तानका नाममा बालबालिका तस्करी, कसरी पुर्‍याइए ६ देशमा १३७ बालबालिका ?
क्यानडाले नेपालबाट पाँच बालबालिका लगेको सूची बुझाएको छ। तर, मन्त्रालयसँग रहेको तथ्यांकमा दुई जना मात्र लगिएका छन्। स्विजरल्यान्डले पनि नेपालबाट दुई जना बालबालिका ल्याएको सूची एचसीसीएचलाई बुझाएको छ। तर, यहाँबाट एक मात्र बालिका लगिएको तथ्यांक छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिइएको हो।
सदरमुकाममै भेटियो प्लास्टिकको चामल!